Rexroth usoro Hydraulic mgbapụta akụkụ
Elephant Fluid Power: Nye akụkụ Rexroth Hydraulic mgbapụta akụkụ, mbụ OEM mgbapụta akụkụ na inyeaka factory mgbapụta akụkụ.
Elephant Fluid Power: nkwa dị mma na ọnụ ahịa kwesịrị ekwesị, yana ọrụ zuru oke ahịa ahịa.
Ka ọ dị ugbu a, ụdị ndị kachasị ewu ewu na Hydraulics bụ Danfoss, Char Lynn, M + S, HANJIU, nke ọ bụla nwere uru nke ya, agbanyeghị ihe kpatara ọtụtụ ndị ahịa ji ahọrọ HANJIU bụ n'ihi na ọ nwere uru pụtara ìhè karịa ụdị ndị ọzọ n'ihe gbasara nnyefe, ọrụ, ogo na uru uru.
Ọsọ ọsọ ọsọ ụgbọ elu
Igwe hydraulic orbital
Anyị gị n'ụlọnga ma kesaa mba a ma ama ika "HANJIU" haịdrọlik Motors.
Anyị bụ ndị na-arụpụta akụrụngwa hydraulic, Anyị na-emepụta ma na-enye naanị ogo dị elu, ntụpọ enweghị hydraulic nwere ike ịtụkwasị gị obi. Ihe mere ọtụtụ ndị ahịa ji ahọrọ US bụ n'ihi na ọ nwere uru doro anya karịa ụdị ndị ọzọ na nnyefe, ọrụ, ogo na oke.
HANJIU usoro haịdrọlik Orbitrol n'iru akara unit
Gụnyere valvụ ejikọtara (valve enyemaka na valvụ mkpuchi), Dochie Danfoss (ospc), M + S (HKU / 4) usoro.
Elephant Fluid Power na-enye ngwa ngwa Caterpillar mgbapụta na uru nke ọnụ ahịa ezi uche, nnyefe ọsọ ọsọ na mma oem.
A2FE160 180 pistin pump spare parts Big Bearing T7FC070, Elephant Fluid Power na-enye hydraulic piston pump bearings, mbido mbụ, ọnụahịa ahụ nwere ezi uche, a ga-ezigakwa ya n'ime ụbọchị 5.
F-201346 bụ mbido mbụ nke mgbapụta mgbapụta Rexroth A4VG125. Elephant Fluid Power na-enye hydraulic plunger pump pump biarin. Mbido mbụ dị na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya ma wepụta ya n'ime ụbọchị 5.